IWARNER BROS: UTOM NOJERRY IMUVI YOOPOPAYI UZA NGO-2020, NANTSI YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IIMUVI
UTom noJerry abadingi singeniso sitsha, ngenxa yokuthandwa kwayo ukusukela kwiminyaka yoo-1940. Wonke umntu ukhulile ebukele
UTom noJerry Akudingi singeniso sitsha, ngenxa yokuthandwa kwayo ukusukela ngeminyaka yoo-1940. Wonke umntu ukhulile ebukele usukuzwano phakathi kwaba balinganiswa. Inqanaba ngoku likulungele nolunye uhlengahlengiso kuthotho lweekhathuni. Ekhokelwa liBali leTim, oopopayi abasebenza ngoku babukhoma benza i-buzz eninzi.
Eli thuba liza kuphawula ukulungelelaniswa kokuqala kwabalinganiswa ukususela ngo-1992.Ifilimu ibisoloko ixoxwa iminyaka eliqela, kwayezininzi umahluko kuyilo phakathi kwabenzi. Kude kube ekugqibeleni, ifumene ukukhanya okuluhlaza okuvela kwiWarner Bros kwi2018.
Iya kukhupha nini?
Ukulinda ifilimu akuyi kwandiswa. Ifilimu iyikhuphile imveliso yayo yangaphambi kokumenyezelwa kwayo. Ngenxa yoko, ukufotwa kwaqala ngoJulayi 2019 kwaye kwagqitywa kwangoko kulo nyaka. Oko kwakuthetha ukuba imovie ihleli ingachaphazeleki sisibetho.
Umhla wokuqala wokukhutshwa Ifilimu yayingo-Matshi ka-2021. Ngethamsanqa kubalandeli, i-WB igqibe kwelokuba ilungiselele ukukhutshwa kamva kulo nyaka. IKrisimesi ithembisa ukuba iya kuqhuma kubantwana nakubantu abadala ngokufanayo njengoko imovie kaTom noJerry iza kukhupha kwiithiyetha ezikufutshane nawe ngoDisemba 23, 2020.
Umlo uya kube ubetha izikrini ezinkulu ngamazwi abantu abaziwayo kwesi sizukulwana. Ifilimu iya kusebenzisa ukurekhodwa koovimba ukuveza abalinganiswa bakaTom noJerry. UWilliam Hanna, uMel Blanc, uJuni Foray, noPaul bazakuthetha ngoJerry ngelixeshaUWilliam Hanna, uMel Blanc, kunye noDaws Butler baya kunika ilizwi kuTom.
Inkqubo ye- Umboniso bhanyabhanya uya kuba sisenzo esiphilayo kunye nomdlalo ohlekisayo. Umlingisi uCloë Grace Moretz kunye noMichael Peña bazakubonakala kwiscreen, kwaye kamva uColin Jost, uKen Jeong, noRob Delaney bazokuzimanya nabo. Ke ngamagama ambalwa awaziwayo aya kungcolisa indawo.
Lithini eli bali?
Imfihlelo yayo nayiphi na imovie ehlekisayo ilele kwibali layo. Iyaqondakala into yokuba kutheni iWarner Bros igcina eyabo emfihlakalweni. Ifilimu iya kuphinda ijikeleze usukuzwano lwe-duo. Baza kugxothwa kumakhaya abo ekuqaleni kwefilimu.
Ndixakekile, uTom noJerry baya kuza kwiSixeko saseNew York. UJerry uza kuhlala kwihotele yaseNew York apho uKayla esebenza khona, edlalwa nguMoretz. Ihotele ilungiselela umsitho womtshato obalaseleyo. Kwaye hayi-hayi enkulu kukuba nawuphi na umsitho yimpuku ebalekayo ijikeleze. Ke unikwe uxanduva lokususa uJerry. Engakwazi ukwenza loo nto ngokwakhe, uKayla uzisa uTom ukuba amncede.
Ngaba ikhona ikharavani?
Ngelishwa kubalandeli, akukabikho mntu uphumayo. Kodwa xa umboniso bhanyabhanya kulindeleke ukuba uphume ngoDisemba, akufuneki ube kudala ngoku.
Ifilimu inabantu abaninzi abanomdla. UTom noJerry yikhathuni abaninzi abakhule nayo, kwaye ukubabona kwiscreen kuhlala kuyibhonasi. I-duo yahlala ithe cwaka ngokuphawulekayo kumabonwakude, kunye nezenzo zabo bethetha. Ke ukwamkelwa kwendlela yale mihla phakathi kwabalandeli kunokuba yinto enomdla. Ngapha koko, ukuhleka akufuneki kunqabe kwiindawo zemidlalo yeqonga.
ilahlekile kwisithuba se-2020 sexesha lesi-3
Ngaba kuya kubakho ixesha le-3 elahlekileyo kwindawo kwi-Netflix
ebandayo intaba movie cast
Olona luhlu lubalaseleyo lweshayina
Uluhlu lweefilimu ze-naruto zika-2015